အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာဟာသက်သတ်လွတ်ခဲ့သည် | Apg29
ငါသက်သတ်လွတ်စားရန်ကလေးများအားလုံးအားဖြင့် "ရာသီဥတုကယ်တင်" ကိုလိုခငျြတဲ့သူဆွီဒင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သူငယ်တန်းရှိကွောငျးကိုဖတ်ပြီးသောအခါငါအဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာနှင့်အတူဤစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုဖြစ်ပျက်သလဲ?
"ဟစ်တလာဟာသက်သတ်လွတ်ကြောင့်တချို့ကအသားအစားအစာအလွန်ကောင်းသည်, အကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ , မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်ပျော်မွေ့ဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။ "
ဤသည်ဟစ်တလာ၏တဦးတည်းကရှင်းပြသည် provsmakerska ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ကြောင်း Margot Wölk။ ဟစ်တလာ၏ဟင်းလျာများတွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ဝက်အူချောင်း, ခေါက်ဆွဲဟင်းလျာများနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားအသီးအပွခဲ့သညျ။
ရန် ယောသပ်သည် Goebbels ရေး ကသူ့ဒိုင်ယာရီ, ဧပြီ 26, 1942 ခုနှစ်တွင်:
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှုတစ်ခုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအစိတ်အပိုင်းသက်သတ်လွတ်မေးခွန်းကိုခေါင်းဆောင်မြှုပ်နှံ။ သူကအသားစားလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအစဉ်အဆက်ထက် ပို. ယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူသည်စစ်ပွဲအတွင်းအခြေခံအားဖြင့်ကျနော်တို့ရဲ့အစားအစာပေးဝေရေးမပြောင်းနိုင်သောသိတယ်။ သို့သော်စစ်ကြီးအပြီး, သူကဤပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှရည်ရွယ်ပါသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသူပိုင်ခွင့်ပါပဲ။ "
ငါက "ရာသီဥတုကယ်တင်" ကိုလိုခငျြတဲ့သူဆွီဒင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သူငယ်တန်းရှိကွောငျးကိုဖတ်ပြီးသောအခါငါအဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာနှင့်အတူဤအကြောင်းကိုစဉ်းစား သက်သတ်လွတ်စားရန်ကလေးများအားလုံး ။ အဘယ်အရာကိုဖြစ်ပျက်သလဲ?
ကျမ်းစာထဲမှာသငျသညျအစာကိုအမြိုးမြိုးကိုစားရ။ အဘယ်သူမျှမတားမြစ်ချက်ရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမရာသီဥတုအဘို့အပြဿနာမဟုတ်သလိုဘယ်လိုအစားအစာစားဖြစ်ကောင်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အလုံအလောက်အခြားပြဿနာများရှိပါသည်။ စကားမစပ်, ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကပြောပါတယ်ပေးသော, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရိက္ခာရှိသမျှကိုသန့်ရှင်းစေ။
မာကု 7:18 ။ ထို့နောက်သူကသူတို့ကို [ယေရှု] said: သင်သည်ဤမျှလောက်ပညာမဲ့လည်းဖြစ်ပါသလား သင်တို့သည်အလျှင်းမသူ့ကိုသို့ပြင်ပမှလာမယ့်သူ့ကိုညစ်ညူးစေနိုင်သည်ကိုနားမလည်ကြသလော ဒါကြောင့်မိမိနှလုံးသို့သွားပေမယ့်အရာကနေတဆင့်အစာအိမ်ထဲသို့ပါဘူးများအတွက် 19 လုံးကိုအစားအစာကိုစင်ကြယ်စေရမည် နှင့်၎င်း၏သဘာဝကအဆုံးရှိတယ်။
15:28 Acts ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်များနှင့်ကျနော်တို့အဘို့ဤမှတစ်ပါးအဘယ်သူမျှမ သာ. ကြီးမြတ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလိုအပ်သင်တို့အပေါ်၌ တင်. ဖို့မဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ:
အဘယ်အရာကိုနှစ်သိမ့်သည်ဤကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့ဥပဒေများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများတွေအများကြီးနဲ့အတူပါဝင်ပတ်သက်ရပါဘူး။ တစ်ဦးတည်းသာအရာကအရေးကြီးတယ်နှင့်ယေရှုကိုလက်မခံဖို့နဲ့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဖြစ်ပါတယ်။
ရာသီဥတုနှင့်အတူဤလူမျိုးကိုထိန်းချုပ်ဖို့တစ်ဦးရှောင်တိမ်းမှုတွေကိုပုံရသည်။ တကယ်နောက်ကွယ်မှအနေနဲ့အစီအစဉ်၏အဘယျသို့သောပါသလဲ ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာရာဇပလ္လင်ပေါ်အန္တိခရစ်ထားနိုင်မှဖြစ်သနည်း
သင်အစာစားသောအရာကိုကြောက်လန့်သဖြင့်, မကောင်းတဲ့သြတ္တပ္ပစိတ်ရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးမလိုပေ။ အစာစားခြင်းနှင့်ကောင်းသောခံစားရတယ်။ သင်၏အသက်တာကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ရန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာကြွလာသောဝါဒဖြန့်ဘို့မကျပါနဲ့။ ထိုသို့သောဝါဒဖြန့်ယခုကြှနျုပျတို့တှငျနထေိုငျသောအခြိနျမှာ ပို. ပို. ထင်ရှားဖြစ်လာနေပါတယ်။ ဒါဟာအကြိမ်ကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
ရောမမြို့ 14:17 ။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအဘို့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်အတွက်အစားအစာနှင့်သောက်ပေမယ့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။